November | 2014 | landcampaigninmyanmar
Meeting with Land Activist in Myaungmya _ U Win Shwe (Artist U. Shwe Mine from Hit Taine Journal)
We Just get back from Pathein (Delta City), Yaygyi, Myaung Mya and did the study for understanding how government is reacting to solve the land concessions. we will share the report with you when our partner signal us.
Share Mercy Ni Ni
ကိုကြည်လွင်အပါ ဘော်ဒါများ ခင်ဗျား၊ ဟဲဟဲ၊ ကျမတို့ သွားလေ့လာထားတဲ့ ပုံလေးထဲက တစ်ချေို့ပေါ့။ ကြည့်ပါ။
(I) အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ(မူကြမ်း)နှင့်ပတ်သက်၍ ကယား(ကရင်နီ)ပြည် လူထုအခြေပြုအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက်
၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၅-၁၆)ရက်တွင်ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ(မူကြမ်း)နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့်အကြံပြုခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား ကယား(ကရင်နီ)ပြည်ရှိ လူထုအခြေပြုအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဥပဒေပညာရှင်များပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်း(၂၀)ဖွဲ့ကျော်မှကိုယ်စားလှယ် လူဦးရေစုစုပေါင်း(၄၄)ဦး တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်းသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက် ပါသည်။
၁။ ဤအမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ(မူကြမ်း)သည် တောင်သူလယ်သမားများ၏အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ထားခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဖော်ပြထားသောရည်ရွယ်ချက်များသည် မူဝါဒ(မူကြမ်း)နှင့် လုံးဝကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
၂။ မြေအတန်းအစား(၁၀)မျိုးသတ်မှတ်ရာတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ မြေအား ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၃။ ဤမူကြမ်းသည် အများပြည်သူနားလည်ရန်ခက်ခဲသောမူကြမ်းဖြစ်သည်။
၄။ ဤမူကြမ်းအရ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်အခွင့်အာဏာများအားလုံးသည် အစိုးရအာဏာပိုင် အပါအ၀င်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများ၏လက်ထဲတွင်သာရှိနေပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု စနစ်ကိုပိုမိုအလေးပေးနေကြောင်းပေါ်လွင်သည်။
၅။ ဤမူကြမ်းကို အမြန်ဖော်ဆောင်နေခြင်းသည် ပဋိပက္ခများပိုမိုဖြစ်ပွားကြီးထွားစေနိုင်သည့် အပြင် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအပစ်အခတ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်ပျက်ပြား နိုင်သည်။
၆။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့တန်ဖိုးထားမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်တိုင်မြေယာစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်နှင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထားခြင်းမရှိသောမူကြမ်းဖြစ်သည်။
ရ။ ဤမူကြမ်းတွင် ဒုက္ခသည်နှင့်ပြည်တွင်းဌာနေလက်လွတ်သူများ(IDPs)၏ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သော အာမခံချက်လုံးဝဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။
၈။ ဤမူကြမ်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏မြေယာတန်းတူပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောအခန်းကဏ္ဍကို တိကျသေချာစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ ဟန်ပြသက်သက်သာဖြစ်သည်။
၉။ မြေယာအသုံးချမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအကျိုး အတွက်ကိုသာ ဦးစားပေးရေးဆွဲထားပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုများအား လယ်ယာမဲ့၊ မြေယာမဲ့ ဘ၀သို့ရောက်ရှိအောင်တွန်းပို့ရေးဆွဲထားသောမူကြမ်းဖြစ်သည်။
၁၀။ ဤမူဝါဒ(မူကြမ်း)တွင် မြန်မာအစိုးရမှသဘောတူအကောင်အထည်ဖော်ရန် လက်မှတ် ရေးထိုးထားသည့် ကမ္ဘာ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအဖွဲ့ (FAO) မှချမှတ်ထားသော မြေယာလုပ်ကိုင်ခွင့် လုံခြုံမှု ဆိုင်ရာအခွင့်အရေး လမ်းညွန်ချက်များအား လျစ်လျူရှုထားသည်။
၁၁။ လက်ရှိအစိုးရမှ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်(၁၄)ခုတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း (၁၇)ပွဲပြုလုပ်မည့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ(မူကြမ်း)နှင့်ပတ်သက်၍ (၃)နာရီအတွင်း ချပြဆွေးနွေးမည့် အစီအစဉ်သည် စစ်မှန်၍တရားမျှတမှုရှိသော ပြည်သူလူထု၏သဘောထားနှင့်အကြံပြု ချက်များကို လုံးဝရယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ(မူကြမ်း)သည် ဒီမိုကရေစီနည်း ကျကျရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသောမူကြမ်းဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်သူလူထုများအား လက်တစ်လုံး ခြားလိမ်လည်လှည့်ဖျားထားပြီး အများပြည်သူဆန္ဒမပါဘဲ အာဏာရှိလူတစ်စုစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထား သောမူကြမ်းဖြစ်သောကြောင့် လုံးဝ(လုံးဝ)ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
၁။ ကိုသဲရယ် ( Ph:0936071175, Email: thenrehlawjar2013@gmail.com )
၂။ နော်မူထူး ( Ph:09253290633, Email: htooehmoo@gmail.com)
(၁) Karenni Evergreen (KEG)
(၃) Kayah Earthrights Action Network (KEAN)
(၈) Kayah State Peace Monitoring Network (KSPMN)
(၁၀) Local Development Network (LDN)
(၁၁) Land In Our Hands ( ဒို့မြေကွန်ရက်)
(၁၂) Women Galaxy
(၁၃) Kayah Baptist Association
(၁၄) Karenni National Women Organization
(၁၆) Community Youth Center (CYC)
(၁၇) Women Safe House
(၁၈) Deemawso Youth Fellowship (DYF)
(၂၀) Karenni Civil Society Network (KCSN)
‘Hard Work Remains’ _ Obama and Daw Aung Sann Suu Kyi meets
File photo of the Burmese Parliament’s Upper House (Photo: Reuters)
Land Utilization Management Central Committee
Vice-President U Nyan Tun delivers an address at Land Utilization Management Central Committee Meeting No. 1/2013
– to give swift, smooth and satisfactory services to the people
– to remove red tape of government departments that poses obstacle to the public service works
– to cultivate practice of effective service so as to fight bribery and corruptions
– to enable the State to sincerely take accountability and responsibility in giving public services between public service officers and personnel
– to raise attention on values, accountability and transparency in dealing with the people, and
– to promote the trusts of people on government and departmental personnel.
Vice-Chairmen of the Central Committee Union Ministers Lt-Gen Ko Ko and U Myint Hlaing reported on tasks of the central committee and farmland management and Secretary of the central committee Deputy Minister Brig-Gen Kyaw Zan Myint, formation of land utilization management committees at different levels and duty and functions.
Next, the Union ministers, region and state chief ministers and the chairman of the Pyithu Hluttaw Agriculture, Livestock and Fisheries Development Committee presented reports on farmland matters, and the vice-chairman of the central committee reviewed the discussions.
Activity of Peasant Services Network
ဆောင် ကွန် ရက်အောက်မြန်မာနှိင်
သိရှိစေရန်အတွက်မြေယာကိုလူပ်ကိုငိသူများအားသိရှိနှိင် ရန် ရည် ရွယ်၍
စတင်ဆေင် ရွက်လျှက် ရှိပါသည်။
မပြုသောဥပ ဒေအ ပေါ်ပြည်သူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသိ
ရှိနှိင် ရန်နှင့်ယခင် က ရေးဆွဲခဲ့သော
၂၀၁၂ ခုနှစ်နှင့်၂၀၁၃ ခုနှစ်ဥပ ဒေ
ပ ဒေများမဖြစ်စေ ရေးကိုရည် ရွယ်
LEGAL INTENSIVE KNOWLEDGE ENHANCING SUPPORT CAMPING TRAINING IN PATHEIN DONE BY SHARE MERCY AND FIVE PARTNERS
SIX INTENSIVE TRAINING IS CONDUCTED IN OCTOBER 16 TO 19 AND 27 TO 29 IN PATHEIN FOR LAND DISPUTES RESOLVING SUPPORT GROUP BY SHARE MERCY WITH THE SUPPORT OF GW, LAND CORE GROUP, MYINTTAR DEVELOPMENT FOUNDATION, TAMPADIPA INSTITUTE.
ရတနာရဲ့ အမျိုးသားမြေယာမူဝါဒ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ
ရတနာရဲ့ အမျိုးသားမြေယာမူဝါဒ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ.
၂ ၁၁ ၂၀၁၄ နေ့မှာပြူလူပ်ခဲ့တဲ့မြေ
တကယ်မြေကြီးကိူအသူံးပြုနေတဲ့ပြည်သူလူထူများတောင် သူလယ်သမားများမပါဝင် ပဲနှိင် ငံရေး